डाक्टर पढ्न धेरै विद्यार्थी मरिहत्ते गर्दछन्? के नेपालमा साच्चिकै भविष्य राम्रो छ त? – जनस्वास्थ्य खबर
डा. शम्भु खनाल, काठमाण्डाै। धेरै बर्ष पहिले एउटा दुब्लो ज्यानको हल्का जुङाका रेखी देखिँदै गरेको ब्यक्ति साधारण पहिरनमा ब्याग भिरेर बिहानै काठमाण्डौको पुतलिसडकमा लम्किँदै थियो । कतै पुग्ने हतार थियो उसलाई । त्यसो नहुदो त बाटोमा हस्याङ्फस्याङ हुनुभन्दा सिरकमुनी मस्त सपना देखिरहेको हुन्थ्यो होला । हेर्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो, कुनै कलेजतिरको गन्तब्य हुनुपर्छ । सायद ति पाइलाहरुमा भबिष्यमा सपना पूरा गर्ने उधारो आशा हुनुपर्छ । र त्यो हिँडाइ सानैदेखि अबचेतन मस्तिष्कलाई पोशन गरिएको अब्बल हुने चेतनाको परिणाम् हुनुपर्छ । उत्कृष्ट हुने इच्छाले डोर्याएको हुनुपर्छ त्यो आत्मा । तपाईंको अनुमान के होला ?
समयको परिवर्तन होला । त्यो जुङाको रेखी पलाउँदै गरेको दुब्लो ज्यान आज अलिकत मोटाएको हो कि जस्तो देखिन्छ । दार्ही बढेको छ । जुङा पलाएछ । यतिका वर्षमा आज डाक्टर बनेको छ । भन्नुपर्दा उमेरले २८ वर्षमा चलिरहेको होला । तर पढाई अझै निरन्तर छ । अहिलेका सरकारी नियम र बन्धनले लगभग १२ वर्षमा औपचारिक पढाई सकिन्छ । ३ वर्षको पि जि अर्थात् यम डि ,५ बर्षको बन्धन सेवा र फेरी ३ वर्षको डि यम । ४० वर्षको उमेरमा यो डाक्टर पक्का डाक्टर भन्ने हुने देखिन्छ । विभिन्न नियमले बाध्न र कस्न मात्र खोज्दै छ नेपाल सरकार । पहिले डाक्टरी पढाइ प्रबेश गर्दा त्यस्ता कस्ने र बाँध्ने नियम थिएनन् । तर अहिले निशुल्कमा पि. जि. पढाउने र त्यस बापत ५ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने सर्तमा कबुलियतनामा पेलेर गराएको छ । जुन कुरा समय सान्दर्भिक पनि देखिन्न । र न्यायोचित पनि देखिन्न । त्यसैले त असन्तुस्ट स्वर नारासहित उत्रिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि । “ सेवा गर्न चाहन्छौँ । कमारो बन्न चाहन्नौँ । “ आदी नाराले तताइरहेको हुन्छ मन्त्रालय परिसर बेलाबेलामा ।
नियम बनाउने ब्यक्तिले आफुलाई अरुको स्थानमा उभिएर हेर्न नसकेको र बिना अध्ययन पेल्न खोजेर नियम बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा डाक्टर मात्रै छत्रवृत्तिमा पढेको जस्तो व्यबहार देखिन्छ । छत्रवृत्तिको मतलब ब्यक्तिले मिहिनेत गरेर अग्रस्थानमा नाम निकाले बापत पढ्न पाउने अधिकार हो। भने देशको स्वास्थ्य सेवा सुद्रिढ गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । तर कसैलाई दाम्लोमा बाँधेर मात्र त्यसको सुनिस्चितता गर्न सकिन्छ भन्नु नै भ्रम हो । यम बि बि यस पछि २ वर्ष दुर्गम र सुगममा करार सेवामा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही दुई वर्षमा विभिन्न परिस्थिती र स्थिती भोगेर र खुरापात देखेर नै बिरक्त हुन्छन् धेरै जना । मन कुन्ठित हुन्छ । बाध्यात्मक पलायनबाद सुरु हुन्छ । त्यसैले रहर भन्दा बाध्यता नै भन्नुपर्छ । त्यही कुरा पुन : यम डि पस्चात ५ वर्षको बन्धनको सेवामा दोहोरिने सम्भावना छ । त्यो पूरा गर्दागर्दै कपाल फुलिसक्छ । तर पनि पढाइ सकिँदैन । पढाइ नसकिनु पीडा हैन । त्यसको मर्म कसैले नबुझ्नु पीडा हो ।
सबैको लागि समुन्नत र इज्जतको पेशा डाक्टर । आर्थिक सुरक्षाको मोहले डाक्टर पढ्नु भ्रम हो । लगानी गर्दा लाखौंमा र सेवा गर्दा हजारमा गर्नुपर्छ । ब्यक्तिको आशा अनुरुप पटक्कै मिल्दैन । इज्जतको पेशा भन्ने हो भने लापार्बाहीको सस्तो न्वारन ब्याप्त छ । भौतिक र आर्थिक दुबै क्षति हुने । यस्तो हुनुमा जनमानसको बढ्दो आशा र अल्पज्ञान तथा स्वास्थ्य क्षत्रको ब्यापरीकरण कारक तत्व छन् । जे भएपनी यो पेशा असुरक्षित हुँदै छ । दुबै आर्थिक र भौतिक रुपले असुरक्षा । सम्मानित भएर पैसा कमाउने सोचले यो क्षत्र प्रबेश गर्नु नै गलत हुन्छ । न सरकारले सम्बोधन गर्छ । न आफ्नो पढाइ समयमा सकिएर कमाउन सकिन्छ । उमेरको दुई तिहाइ नै विद्यार्थी जीवन । । यो त विशुद्ध सेवाको पेशा हो ! निस्वार्थ सेवा । चालिस कटेसी रमाउने भए सोच्न राम्रै हुन्छ ! सरकारको आदर्शवादी सोच मनन गर्ने हो भने त उमेर ५० पुग्छ होला । के गर्नु ! डाक्टर मात्रै आदर्शवादी हुनुपर्छ यो देशमा !
त्यो दुब्लो ज्यानको प्रगती र हाम्रो देशको प्रगती उस्तै हो । दुबै मन्दगति । काँचुली नै फेर्ला भन्ने आश छैन। । अरु कुनै विषयमा नलाग्ने बन्धन हाम्रै विषयमा छ । यता त्यही बन्धन एक किसिमले ब्यक्तिगत प्रगतिको ब्रेक हो । उता ओहदावालाको खराब नियतले देशको प्रगतिमा ब्रेक सादाबाहर छ । देशको प्रगतिमा टेवा पुग्ने भए त हाम्रो दुई बर्ष समर्पण गर्न हुन्थ्यो । यहाँ त ५ वर्षको बन्धन थोपर्न खोज्दै छ नेपाल सरकार । अझै मन्दगति हुने भयो ब्यक्तिगत बिकास । देशले उन्नती गरे आफ्नो पनि उन्नती होला । आफुले उन्नती गरे देशले उन्नती गर्ला । त्यसरी बाँध्नै पर्छ र ? नेपालमा जन्मिएर सुबिधा अमेरिकाको जस्तो खोज्नु मुनासिव त नहोला । तर चिकित्सा पेशालाई यथोचित सम्मान दिन नसक्नु राष्ट्रको कमजोरी नै हो ।पहुँचवालाको अड्डामा सुबिधा मस्त खन्याउने । तर काम भने अस्पातलमा मात्र चुस्त खोज्ने प्रवृत्ति । “ तिमीहरु त चौबिसै घण्टा सजग हुनुपर्छ । नाइनास्ती हुँदैन। “ भन्दै घुर्की देखाउने बेलाबेलामा । “ श्रमको मूल्य उचित भएन । हजुर । “ भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने । अर्थ मन्त्रालय ,अख्तियार ,महालेखा, भन्सार ,अदालतमा भने कानेगुजी पनि सफा गरी सुन्ने हाम्रो सरकार । यो पीडाबोध कसैले बुझ्न सक्दैनन् । डाक्टरलाई बाँधेर तह लगाउन खोज्नु, तर सम्पूर्ण राष्ट्रको स्वास्थ्य हेर्ने चिकित्सा क्षत्रको सुबिधामा कन्जुसी गर्नु कहाँ सम्म न्यायोचित होला ?
सन्तुष्टि र सुखलाई जिवनको गन्तब्य मान्नु हुँदैन । त्यो गन्तब्य त कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । किनभने ब्यक्तिसँग मानौँ ९९ प्रतिशत इच्छा पूरा भएको छ भने पनि उसले त्यसलाई १०० बनाउन खोज्छ । बिडम्बनाको कुरा हो । त्यो सधैं ९९ नै रहन्छ । आफ्नो बाली भन्दा अरुको बारीको बाली राम्रो देखिन्छ । शायद मानबिय प्रवृत्ति नै होला । त्यसैले डाक्टरी पेसालाई समय अनुरुप केलाउँदा धेरैले सन्तोषजनक नदेखेको । संघर्ष सबै बिधामा हुन्छन् । चिकित्सा बिधामा मात्र संघर्ष र दिक्दारी बढ्दो छ भनेर भन्दिन । तर यो बिधामा होम्मिन लालायित ति हजारौँ मनहरु एक पटक सोचेर मात्र मरिहत्ते गर्नु उत्तम होला भन्ने मेरो निचोड छ । सुख र सन्तुष्टी त एउटा यात्रा हो । त्यसलाई गन्तब्य बनाएर यो पेशामा प्रबेश गर्नु भबिष्यमा दिक्दार हुनु हो । तर सुख र खुशीलाई यात्राको साथी बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने मन छ भने यसका रङिन आयामहरु रहरलाग्दा छन् । त्यसको चर्चा कुनै दिन गरौँला । अब निर्णय गर्ने जिम्मा तिनै पुतलिसडकतिर केन्द्रित मनहरुलाई । जो अहिले दिग्भ्रमित छन् । अहिले अर्जेन्टिनाबाट विश्वकप खेलेको मेस्सी र नेपालका डाक्टर एउटै हुन् । गोल खाने र बस्ने । एक्लो बृहस्पती जहाँको त्यँही ।
त्यही धेरै वर्ष पहिलेको दुब्लो ज्यानको मनोभाब आज शब्दहरुमा उत्रिने प्रयास गरेको छ । त्यो अझै पनि दुब्लो नै छ । कुनै दिन सात्विक तरिकाले सुहाउँदो मोटाएछ भने पुन: शब्दबाट भेटौँला । धन्यवाद ।